Guuritaanka ay alshabaab guureen, maxey ku soo kordhin doontaa magaalada Muqdisho? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
In kasta oo ay aad u adag tahay ka faaleynta arimaha iyo waxyaabaha ka dhacaaya geyiga Soomaaliyeed qaasatan magaalada Muqdisho hadana waa lagama maarmaan in la fiiriyo oo weliba la isku dayo in si miisaaman looga faaloodo oo weliba laga yiraahdo wax dadka iyo dalkaba anfac u leh.
Isbedelkaan filan waaga ah ee maanta laga soo sheegay magaalada muqdisho waxa uu aad ugu eg yahay kii soo maray maxmamadihii markii ay soo afjareen dagaaladii ay kala soo horjeedeen raggii dagaal oogayaasha ahaa ee heystay muddada dheer magaalada Muqdisho, taas oo u gacan gelisay awood aysan weligood ku riyoonin keentayna ineyba qaadi waayaan oo ka tan badisay dhamaantood.
Ma laga yaabaa in nimanka hadda sheegtay iney guuleysteen (dowlada ku meel gaarka ah) iyo xulufadeeda iney keeni waayaan wax xal ah oo ummada ay ka gadaan maadaama ay ka guuleysteen sida ay sheegayaan kuwii ay sheegi jireen iney nabada ka soo horjeedaan? Sidii horey u dhacday markii ay maxkamaduhu guuleysteen.
Akhristow dadkaan hadda kala guuleystay waxa ay maalin wada ahaayeen kuwii ka soo horjeeday dagaal oogayaashii waxeyna markii danbe u xuubsiibteen in iyagu is arkaan isla markaasna ay qoriga caaradiisa ay ku kala halmaalaan, waxaase mar walba bulshada Soomaaliyeed loo sheegaa in marka hore ay saaxiibo dan guud u socda wada yihiin muddo ka dibna waxaa soo baxa in nin kastaaba uu lee yahay dan u qaas ah oo uu rabo inuu gaaro si uu dantaas u gaarana saaxiib , walaal, dal iyo diinba toona uma aabo yeelo waana taas midda keentay baaba’a muddada ka socday magaalada muqdisho laga soo bilaabo maalintii ay dalka ka baxeen ciidamadii Itoobiya ilaa iyo hadda.
Ka guuritaanka ay alshabaab ka guureen, maxey ku soo kordhin doontaa magaalada Muqdisho? Runtii waa wax uu ilahey kaliya uu war u haayo balse waxaa la dhayalsan karin waxyaabihii aan ka baranay isbedeladii isdaba joogga ahaa ee ka dhacaayay magaalada Muqdisho labaatankii sano ee la soo dhaafay. Waxaana caado aheyd in midba midka ka danbeeya uu ka sii xumaado kana qaab darnaado kii ka horeeyay oo mar walba waxaa bulshada u soo hoyanaayay wax aysan ku farxin oo runtii aanan iyaga dantooda marnaba aanan ka fikirin. Maxey hadda noqon?
Waxaan marna la dhayalsan karin sida ay ku timid guushaan ay dowladu sheegatay, oo ay weliba alshabaab xaqiijiyeen, ee ku saabsan ka guurida magaalada ama ka saarida magaalada waa hadba sida ay golo walbaaba ay rabtee, waxeyse u eg tahay faanoole fari kama godna waayo waxa isbedelka keenay waa wax aanan cidi heynin runteeda dhabta ah, balse mala awaalku waxa uu yahay mida ay qolo walbaba sheeganeyso. Haddiise aad fiiriso waaxa ay qolo walba sheeganeyso waxaa kuu soo baxaya inaan wax dhamaaday aysanba jirin balse la isu ula gunayaayo.
Marka laga yimaado dhinaca alshabaab oo iyagu sheegay iney ka baxeen magaalada Muqdisho, Soomaaliyey yaa isugu haray magaalada Muqdisho?
Waxaa Muqdisho isugu haray qolooyin la yiraahdo dano badan oo waxa isu keenay oo kaliya ay tahay cadow ay wada jir u lahaayeen kaas oo ahaa alshabaab. Sida aan wada ogsoonahay waxaa magaalada muqdisho ka wada dagaalami jiray ciidamo ka wada yimid ururka Ahlusunna waljamaaca, qeyb ka mid aheyd urukii Xilbul Islaam oo uu hogaamiyo Indhacade iyo Ciidamada dowladda marka laga yimaado ciidamada AMISON oo iyagu ah howl kale.
Sedexdaan ciidan ee aan soo sheegnay, waxay u badan tahay ineysan laheyn hogaan mideysan oo aan ka aheyn iney dhamaantood necbaayeen alshabaab isla markaasna ay lagama maarmaan u aheyd iney si wada jir ah ay meel uga soo wada jeestaan cadowgooda guud. Maadaama maanta ay cadahay in magaalada ay ka baxeen cadowgii ay wada jirka uga soo horjeedeen, waa maxay waxa laga filan karo, maadaama aysan isku dan aheyn isku meelna aanan laga maamulin?
Runtii wey adag tahay in si toos ah loo yiraahdo waxa laga fili karo, balse waxaa hubanti ah ineysan laheyn qorshe mideysan oo horey ugu degsanaa oo ay ugu talo galeen xiligaan oo kale maadaama aanba la fileynin iney tani imaan doonto oo si fudud magaalada muddo kooban ay alshabaab uga bixi doonaan.
Waxaase suurta gal ah, maadaama cadowgii ay wada jirka uga soo horjeedeen uu meehsa ka dheeraaday in iyagu ay is goonsadaan oo magaaladu ay mar kale ku soo noqoto xaaladdii ay ku jirtay sanadihii la soo dhaafay, in taas laga badbaadana waxaa keeni kara dhowladda meesha ku magacaaban oo la timaada qorshe hufan oo dhaliya is fahan iyo iskaashi ku dhisan kalsooni, kaasoo salka ku haya sidii looga hortegi lahaa wax kasta oo dhalin kara hurin colaado hor leh oo ka dhasha magaaladaas.
Marka aan dib u fiirino fashilkii ku yimid maxkamadihii waxaad moodaa in ay xaaladu wax yar ka duwan tahay waqtigaas oo maanta waxaa dalka ka jira dowlad tabar daran balse heysata aqaoonsi maantana heshay fursad qaali ah oo ay ugu yaraan ku maamuli karto magaalda muqdisho. Su’aasha meesha taalaahi waxa ay tahay, ma tahay dowladaani mid ka faa’iideysan karta fursadaan oo dalka iyo dadka ma u horseedi kartaa NABAD waarta iyada oo aanan waqti ku dhuminin guulaha aanan meelna jirin oo maalinba ay qolo sheegato?
Jawaabtu waa HAA, balse waxaa lagama maarmaan ah in ay dowladaani culeyska saarto sidii dalka looga hirgeli lahaa dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhex mara dowladda iyo ururada mucaaradka ee iyaga ka soo horjeeda oo uu ugu horeeyo alshabaab. Taasina waxa ay keeni kartaa, in wada hadal lagu dhameeyo wax kasta oo isfahan waa ah. Waxaa laga yaabaa in dowladdu isu sheegto iney awood leedahay cid kastaana ay awood ku maquulin doonto. Waxaan taas ka lee yahay haddii ay awood wax tereyso qaar badan ayaa iyagoo dowladaan ka awood badan hadana saq dhexe isaga huleelay awoodoodi, marka waa in dhowladdu waxa ay ku gaari karto wada hadal ay ku raadiso wada hadal oo ay dhinac iska dhigto qorigan aan wax uu holciyo ma ahane aanan laheyn wax uu daaweeyo.
Guntii iyo gabagabadii, waxaa aad iyo aad u muhiim ah in ummadda Soomaaliyeed aysan dalkooda ka noqonin daawadayaal, oo waa iney si toos ah wax uga qabtaan, waxna uga yiraahdaan isbedelada xowliga ku socda ee maalin walba ka dhacaaya guud ahaa dalka Soomaaliyeed iyo gaara haan magaalada Muqdisho. Haddii ay dhacno in aanan waxba lagu darsan waxaad raali ka noqoneysaan wixii la idiin keeno oo laga yaabo inaadan ku qancin. Khaasatan dhalinta wadaniyiinta ah meel kasta ay caalamka ka joogaan waa iney isku dayaan iney la yimaadaan fikrado mideysan oo lagu badbaadin karo dalkooda hooyo. Waana iney la yimaadaan foojignaan ballaaran maadaama uu dalku marayo waqti kala guur ah oo wax kasta ay suurta gal yihiin.
« Baaba’a dadka Soomaaliyeed dad bey shaqo u tahay.
Shirka dowladu shaacisay, maxey uga gol leedahay? »